Pasitera Mailhol Manjaka loatra ny tsy fifampitokisana
Mahazo vahana ny rotaka sy fitsaram-bahoaka, saika manerana ny Nosy io. Nisongadina ny tany Mampikony sy tany Maintirano farany teo. Amin�i Pasitera Mailhol dia tsy fifampitokisana misy amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana no mahatonga io endrika tsy herisetra ara-pirahamonina io.
Fa eo ihany koa ny tsy fahatokisan'ny mpitandro ny filaminana ny eo anivon'ny Fitsarana, tahaka izany ny tsy fifampitokisana eny amin'ny fonja satria misy hoy izy ireo mahitahita ka manao izay ivoahana tao. Izany dia hamafisin'ny teny baiko avy any ambony, hoy ihany i pasitera Mailhol ka manjary sehatra sarotra vahana io tranga io. Mahakasika ny Frankofonia ampiantranoan’i Madagasikara tamin’ity herinandro ity indray dia nilaza ny tenany fa maro ireo mahazo tombontsoa mivantana toy ireo mpampiantrano sy mpampanofa fiara sy ny sisa tsy voatanisa. Ho an'ny vahoaka Malagasy koa dia fotodrafitrasa mitoetra ireny naorina ireny, hoy ihany izy. Ao Fianarantsoa ny pasitera Mailhol amin’izao, hanatrika ny fankalazana ny faha-15 taona nijoroan'ny Fiangonana Apokalipsy ao an-toerana sy ny faha-20 taona nisian'ny Fiangonana tarihiny. « Manana tombony ny renivohitr'i Betsileo amin'ny fitoriana fa eto irery ihany no misy ny televiziona mivoy izany fireham-pinoana izany eto Madagasikara », hoy izy.